Hlukanisa amafolda akho ku-KDE ngokunikeza umbala ohlukile | Kusuka kuLinux
Ngiyazi ngabantu abahlela isikhathi sabo ngokusebenzisa izaziso ze-Facebook, abanye (nami uqobo) baqondiswa i-imeyili, abanye basebenzisa i-WhatsApp, ukwenza imilayezo ngeqoqo noma into enjalo ... kuze kube seqophelweni lokufaka Whatsapp kumakhompyutha hhayi ku-smartphone yakho kuphela, abanye ngokusebenzisa amakhalenda (esivele sikhulume ngakho I-KOrganizer + Google Khalenda), njll.
1 Hlukanisa amafolda akho ngemibala
2 Ungawahlukanisa kanjani amafolda akho ngemibala
Hlukanisa amafolda akho ngemibala
Kukhona labo abakuthokozelayo ukuba nedeskithophu elula, kukhona labo abangathandi futhi abakhetha ukuyilayisha ngamachweba kanye namanye amawijethi abasiza ukuphatha isikhathi sabo, uhlu lwezitolo, izikhumbuzo, njll.
Futhi, kukhona labo abasungule indlela yokuhlela umsebenzi wabo, bahlele imininingwane ngemibala ethile, njengoba abanye bethu benzile eminyakeni eyedlule ngalawo makhidi anemibala ayinamathiselwe kusibonisi sethu, isiqandisi, njll.
Nge-plugin noma i-addon in KDE nathi singenza okufanayo. Hhayi kuphela imininingwane kunoma yimuphi umbhalo osukhona noma abahleli bamanothi, kepha manje sesingahlukanisa amafolda ethu ngemibala.
Ungawahlukanisa kanjani amafolda akho ngemibala
Ngenxa yalokhu kufanele silande Umbala Wefolda YeDolphin, Nasi isixhumanisi:
Landa Umbala Wefolda YeDolphin
Uma sesilandiwe siqhubeka nokuyivula kuziphu, izokwakha ifolda ebizwa ngokuthi: ihlengethwa-ifolda-umbala-1.4
Sifaka leyo folda ngokusebenzisa i-terminal (noma ngesiphequluli sefayela bese ucindezela u- [F4] ukuletha i-terminal) bese usebenzisa ifayela ukufaka.sh
Awazi yini ukuthi i-terminal ivele nge-F4? … Ngabe ufuna ukwazi ukuthi uyivula kanjani i-terminal kanjena kwesinye isiphequluli sefayela? … Vakashela lesi sixhumanisi: Khombisa / vula ukuphela kusiphequluli sakho sefayela
Izosibuza ukuthi yimuphi umsebenzisi esifuna ukumfakela le nketho, futhi yilokho kuphela.
Uma sekufakiwe, siyavala bese sivula kabusha I-Dolphin, isiphequluli sefayela.
Manje lapho sichofoza ngakwesokudla kufolda, sizoba nemenyu ebizwa ngokuthi Color:
Futhi i-voila, singafaka imibala kuwo wonke amafolda esiwafunayo ... size siguqule ikhompyutha ibe uthingo 😀
Ngokwami, nginamafolda ama-2 kuphela anemibala ehlukile kokuzenzakalelayo, ifolda yokuSebenza nefolda ye-Temp, angidingi okungaphezulu.
Umbhali walokhu ngu-autoban, nansi isixhumanisi ku- I-KDE-Look.org
Kuvumelekile ukucacisa ukuthi uma iphakethe lesithonjana lingenayo ifolda efanayo ngemibala ehlukene, lokhu ngeke kusebenze. Okusho ukuthi, lokhu kusebenza ngendlela elula, lapho sikhetha omunye umbala ifolda enombala okhonjisiwe iyaseshwa, uma ngabe isithonjana sephakethe lethu lingekho, lapho-ke sinenkinga. Ngizamile amaphakethe wezithonjana eziningana futhi ngaphandle kwenkinga, kepha imininingwane okufanele uyicabangele
Nayi eminye imibhalo ephathelene neDolphin:
Landa ifayela kusuka kunethiwekhi liye ngqo kufolda oyifunayo
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Hlukanisa amafolda akho ku-KDE ngokunikeza umbala ohlukile
Kuhle, kubukeka njenge-OS X
Kuhle kakhulu. Siyabonga ngokufaka. Ozithobayo.
Ukwengeza okuhle kakhulu futhi kuyasiza kakhulu ukuthola amafolda shazi. Kepha ngithola ukuthi kuphela lawo mafolda angenakho ukubuka kuqala kwamafayela enza umbala. Isibonelo: Amafolda anezithombe, izithonjana ziyabukwa kuqala kusithonjana. Yebo, kulawo mafolda umbala awuthathiwe futhi uqhubeka nombala ozenzakalelayo weDolphin. Angazi noma into efanayo iyenzeka komunye umuntu.
Lokho kumele kube ngenxa yenqolobane ye-KDE ..
Isandiso esihle kakhulu 🙂
Nayi enye yeNautilus, iNemo neCaja:
Kwakukhona vele into efana naleyo engiyikhumbulayo ngisho nezithonjana zomoya-mpilo eziletha le modi kepha kuyindaba yokuyethula kumenyu yeDolphin.Iyasebenza nokuthi iyiphi i-icon pack noma ingabe iyindinganiso kungakhathalekile ukuthi ufake ini. Endabeni ye-EOS neMint isebenza kuphela ngokwabo.
I-Whatsapp yepc kusho
Phendula ku-whatsapp nge-pc
Vikela ikhompyutha yakho ekulweni ne-ping